ယောသပ်သည်-ယေရှု၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည် | Joseph – A Type of Christ | Real Conversion
(Sermon # 71 on the Book of Genesis)
၂၀၁၃ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
ကမ္ဘာဦးကျမ်းမြတ်တော်ထဲက ဒေသနာတော် အမြောက်အများဟောကြားဝေငှခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ၊ ဤသည် ခုနှစ်ဆယ်တစ်ကြိမ်မြောက်သော ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါသည်။ “ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏ ဒေသနာ” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ဝေဖို့ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ကမ္ဘာဦးကျမ်းမြတ် တော်ထဲက ကျမ်းပိုဒ်ကို အစပြုဖတ်ကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ထားသော ကျမ်းပိုဒ်မှာ ရှင်လုကာထဲက ဖြစ်ပါသည်။ ဝတ်ပြုအစီအစဉ်အစ၌ မစ္စတာဖရုတ်ဟုန်းဖတ်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ရှင်လုကာ ၂၄း၄၄ နှင့်၄၅ ကိုမတ်တပ်ရပ်က်လျှက် အတူဖတ်ကြပါစို့၊ ၎င်းကို စကော့ ဖီးလ်ကျမ်းစာ၏ စာမျက်နှာ ၁၁၁၂တွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
“ပြင်စွာသော ဝေဒနာကို ခံလျှက် အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေး ထွက်တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း။ ထိုသို့ ဆုတောင်းပြီးမှ ယေရှုသည် ထ၍ တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်သောအခါ သူတို့သည် ဝမ်းနည်းသော စိတ်ရှိသည်နှင့် အိပ်ပျော်လျှက် နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူလျှင်” (လုကာ ၂၂း၄၄-၄၅)။
“ကိုယ်တော်ကလည်း ပရောဖက်ဟောပြောသော စကားများကို ယုံနိုင်အောင် ညဏ်မရှိ၊ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသောသူတို့၊ ခရစ်တော်သည် ဤသို့ပင် အသေခံ၍ မိမိဘုန်းစည်းစိမ် တော်ကို ဝင်စားရမည်မဟုတ်လော့ ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ မောရှေ၏ကျမ်းစာမှ စ၍ ပရောဖက်တို့၏ ကျမ်းစာများ၌ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ ရေးသားသမျှသော ကျမ်းစာချက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြတော်မူ၏” (လုကာ ၂၄း၂၅-၂၇)။
“ထိုအခါ မောရှေ၏ ကျမ်းစာမှစ၍ ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများ၌ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ ရေးသားသမျှသော ကျမ်းစာချက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြတော်မူ၏” ဟူသော အပိုဒ်ငယ် ၂၇ကို အဓိကထား ဝေငှတိုက်တွန်းပါမည်။ အားလုံးထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။
“ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍” ၎င်းကျမ်းပိုဒ်ကို ကမ္ဘာဦးကျမ်းမြတ်တော်မှ ယေရှုကိုးကားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရေးသားဖော်ပြခြင်းသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ယေရှု၏ “ပုံရိပ်” ပင်ဖြစ်သည်။ ပုံရိပ် တစ်ခုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နောဧနှင့် လူခုနှစ်ယောက်တို့ကို သဘောFဖြင့်ကယ်တင်လေ၏ ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်သည် ကမ္မာဦးကျမ်းစာတော်ထဲ ကပင် ဖြစ်သည်။ သဘောFသည် ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်၊ ပျက်စီးခြင်းထဲက ရွှေးနုတ်ခြင်းကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။ ပုံရိပ်သည် သင်္ဘောဖြစ်၍၊ ပုံဖော်ခြင်းကား၊ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ညတရားဒေသနာတော်တွင်၊ ခရစ်တော်ကို ပုံဆောင်သော ကမ္ဘာဦးကျမ်း ထဲက ယောသပ်အကြောင်းတွေ့မြင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့ ပထမနှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သင်းအုပ်ဆရာကြီး ဒေါက်တာ အိုင်အမ်ဟေဒါမင်က၊ ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲက ယောသပ်နှင့်ဓမ္မသစ်သ တင်းကောင်းကျမ်းလေးကျမ်းထဲက ခရစ်တော်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ရာတစ်ချက်သော နှိုင်းပြစရာများ စွာကို ကောက်နုတ်ထားခဲ့ပါသည်။ စဉ်းစားစရာပင်! ခရစ်တော်သည် ပုံဖော်ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်။ ယောသပ်၏များလှစွာသော ပုံရိပ်၊ ခရစ်တော်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်! “မောရှေ၏ ကျမ်းစာမှစ၍ . . .ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းစာများ၌ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ ရေးထားသမျှ” (လုကာ ၂၄း၂၇) သည် ယောသပ်ပုံရိပ်အား ခရစ်တော်၌ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်ကို သံသယမရှိပါ။ ခရစ်တော်နှင့် ယောသပ်တို့ကြားက နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ရာ တစ်ချက်ကို ဝေငှမည်မဟုတ်ပါ! သို့သော် နှိုင်းယှဉ်စရာ များစွာ နှိုင်းပြဝေငှပါမည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း၏ အဆုံးသတ်အခန်းကြီး တစ်ဆယ့်လေးခန်းသည် ယောသပ်အကြောင်း အဓိကရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ အခန်းကြီးတော်တော်များများ၌ ယောသပ်ထက် အခြားသူတို့ကို အလေးပေးရေးသား ဖော်ပြထားပါသည်။ များသောအားဖြင့် ယောသပ်ထက် အာဗြံဟံ၊ ဣဇာက်၊ ယာကုပ်နှင့် အခြားသော သူတို့အကြောင်းများများစားစား ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်က ဖော်ပြသည်မှာ၊ ယောသပ်သည် ခရစ်တော်နှင့် အလားတူဖော် ပြထားသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၌ တွေ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာ ၃၇း၂ ၌ ရေးသားထားချက်ကို စကောဖီး မှတ်ချက်ပေးထားသည်မှာ၊ “ယောသပ်သည် ခရစ်တော်၏ အခိုင်အမာပုံရိပ်ဖြစ်သည် တိုက်ဆိုင်မှု မြောက်များစွာ တွေ့ရပါသည်” ဟုကောက်ချက်ပေးထား၏။ “တိုက်ဆိုင်မှုများရှိသည်”ကို ကျွန်ုပ် သဘောတူပါသည်။ ဓမ္မာသစ်ကျမ်း၌ ခရစ်တော်၏ ပုံရိပ်ဖြစ်သည်ဟု ဘယ်တောမှ မဖော်ပြသည် ကို သဘောမတူနိုင်ပါ။ ၎င်းကို အချိန်အတော်ကြာ ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ အဆုံးတွင် ယောသပ် သည် ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်ကို ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုမှတ်ချက်ပေးလိုပါသည်။ သတင်းကောင်းလေး ကျမ်း၌ ခရစ်တော်သည် ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းလေးကျမ်း၌ ပုံဖော်ခြင်း မကြာခဏ တွေ့ရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် “တိုက်ဆိုင်မှု မြောက်များစွာရှိသည်” ဒေါက်တာဟေမန်က ယောသပ်သည် ခရစ်တော်၏ပုံရိပ် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုခြင်းသည် အမှန်အကန် ဖြစ်ပါသည်။ ယောသပ်သည် ခရစ်တော် ပုံရိပ်ဖြစ်ခြင်းနှိုင်းယှဉ်ချက် စာကြောင်းတစ်ဆယ့်ငါးကြောင်းဖြင့် ဖော်ပြ ပါသည်။
၁။	ပထမ၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအား ခမည်းတော်က နက်ရှိုင်းစွာချစ်သည်။
“ဣသရေလသည် အသက်ကြီးစဉ်အခါ၊ သားယောသပ်ကို ရသောကြောင့်၊ အခြားသောသား အပေါင်းတို့ကို ချစ်သည်ထက် ယောသပ်ကို သာ၍ချစ်၏” (ကမ္ဘာ ၃၇း၃)။
ဣသရေလဟူသည် ယာကုပ်၏နာမည်သစ် ဖြစ်သည်။ ဣသရေလသည် သားအပေါင်းတို့ထက် ယောသပ်ကို ချစ်သည်။ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့် နှစ်ခြင်းခံယူသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်မှ၊
“ဤသူကား၊ ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်း” (မဿဲ ၃း၁၇)။
ယေရှုသည် ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်၏၊ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၂။	ဒုတိယ၊ သူတို့သည် ညီအစ်ကိုတို့၏ မုန်းတီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။
“အဘသည် မိမိသားအပေါင်းတို့တွင် ယောသပ်ကို သာ၍ချစ်ကြောင်းကို အစ်ကိုတို့သည် သိမြင်သောအခါ၊ သူ့ကိုမုန်း၍၊ မေတ္တာစကားကို သူ့အားမပြောနိုင်ကြ” (ကမ္ဘာ ၃၇း၄)။
ယောသပ်၏ညီအကိုတို့က၊ သူ့အားကြင်နာသောစကားကို မပြောနိုင်ပါ။ မုန်းတီးကြပါသည်။ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
ယေရှု၏ညီတော်တို့က၊ ကိုယ်တော်အား၊ ခပ်ပြတ်ပြတ်စကားကို ဆိုခဲ့သည်(ယောဟန် ၇း၃၊၄)။ သူတို့က ကိုယ်တော်အား ဤလောက၌ကိုယ်ကို ထင်ရှားစွာပြပါဟု” “မယုံကြည်သောကြောင့် ယေရှုအားဆိုကြ၏”။ (ယောဟန် ၇း၅)။ ယေရှုသည် ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
၃။	တတိယ၊ သူတို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်သောအခါ၊ ယောသပ်၏အစ်ကိုတို့က၊
“ကိုင်ကြ၊ သူ့ကိုသတ်၍ တ စုံတခုသောတွင်းထဲသို့ချပစ်ကြစို့” (ကမ္ဘာ ၃၇း၂၀)။
ဖာရိရှဲတို့က ထိုနည်းတူ၊ ယေရှုအားပြုမူကြသည်၊ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ထိုနေ့မှစ၍ ကိုယ် တော်၏အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါတိုင်ပင်ကြံစည်ကြ၏” ဘြွမ ။ရြွညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး(ယောဟန် ၁၁း၅၃)။
ယေရှုသည် ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၄။	စတုတ္ထ၊ သူတို့နှစ်ယောက်၏ အင်္ကျီကို ချွတ်ခဲ့ကြသည်။
“ယောသပ်သည် အစ်ကိုတို့ထံသို့ရောက်သောအခါ၊ သူဝတ်သောအင်္ကျီ၊ အဆင်းထူးခြား သော အင်္ကျီကို ချွတ်ပြီးမှ” (ကမ္ဘာ ၃၇း၂၃)။
ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တင်တော်မူခြင်းခံရသောအခါ၊ စစ်သူရဲတို့က “အဝတ်တော်တို့ကို လေးပိုင်းပိုင်း၍ တစ်ယောက်တစ်ပိုင်းစီယူကြလေ၏” (ယောဟန် ၁၉း၂၃)။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ် သည်၊ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသပ်သည် အင်္ကျီချွတ်ယူခြင်းခံရ၍ မြေတွင်းထဲချပစ်ခြင်းခံခဲ့ ရပါသည်။ ယေရှုသည် အဝတ်တော်ချွတ်ခြင်းခံရပြီး လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် ရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံရပါသည်။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၅။	ပဥ္စမ၊ သူတို့နှစ်ဦးသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ အစ်ကိုဖြစ်သူယုဒက ယောသပ်အား ကုန်သည်တို့ထံ ရောင်းစားဖို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “ထိုသူတို့သည် ယောသပ်ကို အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဆောင်သွားကြ၏။”(ကမ္ဘ ၃၇း၂၈)။
ကောင်းကင်တမန်က ယေရှု၏ဖခင်ယောသပ်အား ဟေရုပ်မင်းသည် သူငယ်တော်ကို အသေသတ်ရန် ရှာဖွေနေသည်ဟု ပြောကြားပြီး “ထိုအခါ ယောသပ်သည် ထ၍မယ်တော်နှင့် သူငယ်တော်ကို ညဉ့်အချိန်၌ ဆောင်ယူပြီးလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ထွက်သွား၍” (မဿဲ ၂း၁၄)၌ လာပါသည်။ ယေရှုသည်ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၆။	ဆဌမ၊ သူတို့နှစ်ဦးအား အခကြေးငွေဖြင့်ရောင်းစားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ ယောသပ်၏ညီအကိုတို့က သူ့အားတွင်းနက်ထဲက ဆွဲတင်ပြီး “ငွေနှစ်ဆယ်အဖိုးနှင့် ဣရှမေလလူတို့အား ရောင်း၍” (ကမ္ဘာ ၃၇း၂၈) ဟုလာပါသည်။ ယေရှုသည် ပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုဘုရားအသေခံဖို့ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင်၊ သူ၏တပည့်တော်ဖြစ်သော ယုဒက၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂုလ်တို့ထံသွားပြီး “အကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို ကိုယ်တော်တို့လက်သို့အပ်လျှင် အဘယ်မျှလောက်ပေးပါမည်နည်း ဟုလျှောက်သော်၊ ထိုသူတို့က ငွေကျပ်သုံးဆယ်ပေးမည်ဟု ဝန်ခံကြ၏” (မဿဲ ၂၆း၁၅)။ ယောသပ်အချိန်အခါ၊ ကျွန်တစ်ဦး၏တန်းဖိုးသည် ငွေကျပ်နှစ်ဆယ် သာ အဖိုးထိုက်ပါသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၇၅၉ ခုနှစ်၊ ခရစ်တော်အရောင်းစားခံသော အချိန်အခါ တွင်မူ ငွေကျပ်သုံးဆယ် အဖိုးထိုက်ပါသည်။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့် စုံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၇။	သတ္တမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး စုံစမ်းခြင်းခံရသည်။
ယောသပ်ကို အဲဂုတ္တုဘုရင်၏ အမတ်ဖြစ်သော ကိုယ်ရံတာ်မှူးပေါတိဖါထံတွင် ရောင်းခဲ့ပါသည်။ ယောသပ်အား အိမ်နှင့်ဥစ္စာရှိသမျှကို အုပ်စိုးရန်ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ပေါတိဖါမရှိခိုက် တွင်၊ သခင်၏မယားက ယောသပ်အား “ငါနှင့်အတူအိပ်ပါဟု ဆိုလျှက်၊ ယောသပ်၏ အဝတ်ကို ဆွဲလျှင် ယောသပ်သည် မိမိအဝတ်ကို စွန့်၍ ပြင်သို့ထွက်ပြေးလေ၏” (ကမ္ဘာ ၃၉း၁၂) ဟုလာပါ သည်။ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ လာသည်ကား၊
“ထိုအခါမာန်နတ်၏ စုံစမ်း သွေးဆောင်ခြင်းကို ခံစေရမည်အကြောင်း၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကို တောသို့ ပို့ဆောင်တော်မူ၍” (မဿဲ ၄း၁)ဟုလာ၏။ သို့သော် ယေရှုသည် နုတ်ကပတ်တော်ကို စွဲကိုင်ပြီး တွန်းလှန်ကာကွယ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၈။ အဌမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် မှားယွင်းစွာ စုံစမ်းခြင်းခံရကြသည်။
ပေါတိဖါ၏မယားသည် မှားယွင်းခြင်းအမှုကို ယောသပ်နှင့် ပြုလိုသောကြောင့် မတရား စွပ်စွဲခဲ့ပါသည်၊ (ကမ္ဘာ ၃၉း၁၄-၁၈)။ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည် ယေရှုသည်လည်း ကားတိုင် ပေါ်အသေမခံမှီ၊
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့က မတရားစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ရေးသား ထားပါသည်။ ရှင်မဿဲ အခန်းကြီး နှစ်ဆယ်ခြောက်ကို ဖတ်ကြည့်သော်၊
“မမှန်သော သက်သေခံအများလာသော်လည်း သက်သေကို မတွေ့ကြ၊ နောက်ဆုံး၌ မမှန်	သော သက်သေခံနှစ်ယောက်သည် လာ၍၊ Þဤသူက ငါသည်ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်	ကို ဖြိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်နိုင်သည်ဟု ပြောပါသည်ဟု သက်သေခံ	ကြ၏” (မဿဲ ၂၆း၆၀-၆၂)။
ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပုံရိပ်ကို ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၉။	န၀မ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ချည်နောင်ခြင်းကို ခံရကြသည်။
ပေါတိဖာက ယောသပ်အား မိမိမယားအား အသေရေရှုတ်ချသည်ဟုဆိုပြီး ထောင်ထဲသွင်း ချလိုက်သည်။
“ရှင်ဘုရင်ချုပ်ထားသော သူတို့နေရာထောင်ထဲမှာ လှောင်ထားသဖြင့်၊ ယောသပ်သည် ထောင်ထဲမှာနေရ၏” (ကမ္ဘာ ၃၉း၂၀)။
" မ္မသစ်ကျမ်း၌လည်း၊ ယေရှုအား မတရားသဖြင့် ချည်နှောင်ခဲ့ကြပါသည်။
“ကိုယ်တော်ကို ချည်နှောင်ပြီးလျှင် မြို့ဝန်မင်း ပုန္တိပိလတ်ထံသို့ ဆောင်သွား၍ အပ်လိုက်ကြ၏” (မဿဲ ၂၇း၂)။
ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၁၀။	ဒသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအား ရာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်ကြားချထားခြင်းခံကြရသည်။
ထိုသူနှစ်ဦးအနက်၊ တစ်ဦးသည်၊ လွတ်ခြင်းအခွင့်ရှိသည်။
“ဖါရောဘုရင်သည် ထိုအမတ်နှစ်ယောက်၊ဖလားတော်ဝန်နှင့် စားတော်ဝန်တို့ကို အမျက် ထွက်၍၊ ယောသပ်အချုပ်ခံရာ ထောင်တည်း ဟူသော ကိုယ်ရံတော်မှူး၏အိမ်၌ ချုပ်ထားတော်မူ၏” (ကမ္ဘာ ၄ဝး၂-၃)။
ထိုလူနှစ်ဦးကို ယောသပ်နှင့်အတူ ချုပ်ထားသည်။ တဦးကိုလွတ်လိုက်ပြီး ကျန်တစ်ဦးကို ကွပ်မျက်ခဲ့ သည်။ ယောသပ်သည်ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
" မ္မသစ်ကျမ်း၌လည်း ယေရှုအား လူဆိုးနှစ်ယောက်၏အလယ်၌ ကားတိုင်ပေါ် အသေခံစေခဲ့ သည်။
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လူဆိုးနှစ်ယောက်တို့ကိုလည်း သတ်အံ့သောငှါ၊ ထုတ်သွား ကြ၏” (လုကာ ၂၃း၃၂)။
ကားတိုင်ပေါ်က လူဆိုးတစ်ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်တစ်ဦးသည် ပျက်စီးခြင်းထဲသို့ ကျရောက် ခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ကို ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၁၁။	ဧကဒသမ၊ နှစ်ယောက်စလုံးသည် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ချီးမြောက်ခြင်း ကိုခံခဲ့ကြပါသည်။
မည်သို့ပင် မတရားစွပ်စွဲခြင်းကို ယောသပ်ခံရသော်လည်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ ပါသည်၊ “တဖန်ကြည့်ပါ၊ အဲဂုတ္တုပြည်တပြည်လုံးကို သင်အုပ်ချုပ်စေခြင်းငှါ၊ ငါခန့်ထားပြီဟု ယောသပ်အား မိန့်တော်မူလျှက်” (ကမ္ဘာ ၄၁း၄၁)။ ယောသပ်သည် အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက် လာပြီး၊ တနိုင်ငံလုံးကို အုပ်စိုးခဲ့ပါသည်! ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်။
" မ္မသစ်ကျမ်း၌လည်း ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး၊ ခမည်းတော်၏ချီးမြောက်ခြင်းကို ခရစ်တော်ခံတော် မူခဲ့ပါသည်။
“ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ကို အလွန်ချီးမြောက်၍၊ ဘွဲ့တကာတို့ထက် ကြီး မြတ်သောဘွဲ့နာမတော်ကို ပေးသနားတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ ရှိသောသတ္တဝါတည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ယေရှု၏ ဘွဲ့နာမကို ဒူးထောက်၍၊ ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟု နုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်၊ ခမည်း တော်ဘုရား၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းတည်း” (ဖိလိပိ ၂း ၉-၁၁)
ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံရိပ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၁၂။	ဒွါဒသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ငိုရေူအးကးခဲ့ပါသည်။
ယောသပ်၏ ညီအစ်ကိုတို့သည် ဣသရေလနိုင်ငံ၌ အစာခေါင်းပါးခြင်းဘေးကို တွေ့ကြုံခဲ့ကြ ရပါသည်။ ဆာလောင်ခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းနိုင်ဖို့ အဲဂုတ္တုပြည်၌အစာကို ဝယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သော အစ်ကိုယောသပ်ထံက စားစရာစပါးကို ဝယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုလူသားပမာ၊ နုတ်ခမ်းမွှေး၊ ပါးသိုင်းမွေးများ အကုန်အစင်ရိတ်ထားသဖြင့် အစ်ကိုတို့သည် ယောသပ်ကို မမှတ်မိကြချေ။ အစ်ကိုတော်တို့ကို ယောသပ်သည် တွေ့သောအခါ၊ ငါးကြိမ်မက ငိုရေူအးကးခဲ့သည်ဟု ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ ရေးသားထားပါသည်။ အောက်တွင် ယောသပ်ငို ရေူအးကးခဲ့သည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
“သူသည် ကျယ်သောအသံဖြင့် ငိုရေူအးကး၏။ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် န်းတော်တိုင်အောင် ကြား ရ၏” (ကမ္ဘာ ၄၅း၂)။
" မ္မသစ်ကျမ်း၌လည်း “ယေရှုသည် မျက်ရည်ကျတော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၁း၃၅) ၌ ဖော်ပြထား ပါသည်။ ယေရုရှလင်မြို့ကိုကြည့်ပြီး ယေရှုငိုရေူအးကးခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ တွေ့ရပါ သည်။
“ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ ရောက်၍ကြည့်မြင်လျှက် ငိုရေူအးကးတော်မူ၏” ဘြွမ ။ရြွညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး (လုကာ ၁၉း၄၁)။
၁၃။ တေရသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအပြစ်ရှိသူတို့အား ခွင့်လွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်သောအခါ၊ ယောသပ်သည် နောက်ဆုံးတွင် မိမိအစ်ကိုတော်တို့ထံသို့ မိမိကိုယ်ကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အစ်ကိုတို့က၊ ယောသပ်အားမမှတ်မိကြပါ၊ အကြောင်းမှာ ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သားကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေး ရိတ်ထားသော ကြောင့်ဖြစ်ည်။ ယောသပ်သည် မိမိကိုယ်ကို အစ်ကိုတို့အား ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ ထိုသူတို့အား ခွင့်လွတ် ခဲ့ပါသည်။
“ယောသပ်ကလည်း၊ ကျွန်ုပ်အနီးအပါးသို့လာကြလော့ဟု အစ်ကိုတို့အားဆိုလျှင်၊ သူတို့ သည် အနီးပါးသို့ ချဉ်းကပ်လာကြ၏ သူကလည်းကျွန်ုပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောင်း လိုက်သော သင်တို့၏ ညီဖြစ်ပါ၏” (ကမ္ဘာ ၄၅း၄)။
“ညီဗင်္ယာမိန်လည်ပင်းကို ဖက်၍ငိုလေ၏။ ဗင်္ယာမိန်သည်လည်း သူ၏လည်ပင်း၌ ငိုလေ၏ တဖန်အစ်ကို ရှိသမျှတို့ကိုနမ်း၍ သူတို့နှင့်ငိုပြီးနောက် အချင်းချင်းနုတ်ဆက်ကြ၏” (ကမ္ဘာ ၄၅း၁၄-၁၅)
" မ္မသစ်ကျမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြည့်သော်၊ ယေရှုသည် သူ့အားကားတိုင်ပေါ်တင်သတ်သော သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကယ်တင်ရှင်က “အို၊ သူတို့၏ အပြစ်ကို လွတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်ပြု သောအမှုကို မသိကြဟု မြွတ်ဆိုလေ၏” (လုကာ ၂၃း၃၄)။ ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပုံရိပ် ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်။
၁၄။	စတုဒသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက မိမိလူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ မိမိတို့ပြုမှားခဲ့သော အမှားများအတွက် ဝမ်းနည်း ဖို့ ယောသပ်နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါသည်။ “အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည် လူတို့အသက်ကို စောင့်မစေ ခြင်းငှာ သင်တို့ရှေ့မှာကျွန်ုပ်ကို စေလွတ်တော်မူပြီ” (ကမ္ဘာ ၄၅း၅)။ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။
" မ္မသစ်ကျမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြည့်သော်၊ ကောင်းကင်တမန်ကလည်း “သားယောင်္ကျားကို ဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကို အပြစ်မှကယ်ချွတ်မည့်သူ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ယေရှု ဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ဆို၏” (မဿဲ ၁း၂၁)။ ယောသပ်ပြောကြားသကဲ့သို့ ယေရှုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “သင်တို့အသက်ကို ကယ်တင်အံ့သောငှါ ရူအးကလာသည်ဟူ၏” ယေရှုသည် ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ပုံရိပ်ကိုပြည့်စုံဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နောက်လေ့လာစရာ အရေးကြီးသော အချက်ကျန်ရှိပါသေးသည်။
၁၅။	ပနာရသမ၊ လူတို့သည် ထိုသူနှစ်ဦးကို မကောင်းကြံစည်ကြသော်လည်း၊
နောက်ဆုံးတွင် ယောသပ်၏ အစ်ကိုတို့သည် လာကြ၍၊ ရှေ့တော်၌ ဒူးထောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယောသပ်ကလည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယောသပ်ကလည်း၊
“သင်တို့က ကျွန်ုပ်ကို ဒုက္ခရောက်ဖို့ မကောင်းကြံစည်ကြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်က ယနေ့ဖြစ်နေသည့်အတိုင်း လူများအသက်ချမ်းသာရစေဖို့၊ ကောင်းကျိုးကျေးဇူးကို ကြံ တော်မူ၏” ထို့ကြောင့် မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့၊ သင်တို့နှင့်သူငယ်ချင်းများကို ကျွန်ုပ်မွေးမည် kဆိုလျှက် သူတို့ကို နှစ်သိမ့်စေ၍ မေတ္တာစကားကို ပြောလေ၏” (ကမ္ဘ ၅ဝး၂၀-၂၁)။
ခရစ်တော်ဘုရားက ယနေ့ညပင်၊ သင်တို့အား ထို့သို့သောစကားကို ပြောနေသည်ကို သိစေလို ပါသည်။
“ထို့ကြောင့် မစိုးရိမ်ကြနဲ့။ သင်တို့နှင့်သူငယ်ချင်းတို့ကို ကျွန်ုပ်ကျွေးမွေးမည်ဟု ဆိုလျှက်သူတို့ကို နှစ်သိမ့်၍ မေတ္တာစကားကိုဆို၏” (ကမ္ဘာ ၅ဝး၂၁)။
သေချာသည်မှာ၊ ယောသပ်သည် ပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းပုံရိပ်ကို ယေရှုပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထက် ပါကျမ်းစာစကားအတိုင်း ယေရှု၏နုတ်ကပတ်တော်ထဲက မြွတ်ဆိုခဲ့ပါသည်!
“ထို့ကြောင့် မစိုးရိမ်ကြနဲ့။ သင်တို့နှင့်သူငယ်ချင်းများကို ကျွန်ုပ်မွေးမည်ဟုဆိုလျှက်၊ သူတို့ ကိုနှစ်သိမ့်၍ မေတ္တာစကားကို ဆို၏” (၅ဝး၂၁)။
ထိုသို့သော ကယ်တင်ရှင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ! ကိုယ်တော်ကသင့်အား ကျွေးမွေးပါ လိမ့်မည်။ သင့်အား သက်သာရာကို ပေးသနားတော်မူလိမ့်မည်။ သခင့်အသွေးတော်သည် သင်၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်ပြီး သန့်စင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ယနေ့ညပင် သခင့်ထံတိုးဝင်၍ ယုံကြည်လိုက်ပါ၊ အကယ်၍သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ တရားဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ ရူအးကလှမ်းလာခဲ့ပါ။ ဒေါက်တာကေကန်က ထိုနေရာ၌ ဦးဆောင်ပြီး ဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ယခုပင် သွားလိုက်ပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်ခင်ဗျား၊ ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအခန်းသို့ သွားလိုသောသူအဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာအေဘေလ် ပရုတ်ဟုန်းမှ လုကာ ၂၄း၃၆-၄၅ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် အက်ဗင်ဘီခရစ္စနာစင် မှ (၁၈၉၅-၄၉၈၅)ခုနှစ်
“ယေရှုရှင် ငါဖို့စိတ်ချစရာ” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ပြင်စွာသော ဝေဒနာကို ခံလျှက် အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေး ထွက်တော်မူ သည်ကား မြေပေါ်၌ ကျသောသွေးစက်ခဲ့ကဲ့သို့ ဖြစ်သတည်း။ ထိုသို့ ဆုတောင်းပြီးမှ ယေရှုသည် ထ၍ တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ပြန်သောအခါ သူတို့သည် ဝမ်းနည်းသော စိတ်ရှိသည်နှင့် အိပ်ပျော်လျှက် နေကြသည်ကို တွေ့တော်မူလျှင်” (လုကာ ၂၂း၄၄-၄၅)
၁။ ပထမ၊ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအား ခမည်းတော်က နက်ရှိုင်းစွာချစ်သည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၃ç မဿဲ ၃း၁၇။
၂။ ဒုတိယ၊ သူတို့သည် ညီအစ်ကိုတို့၏ မုန်းတီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၄ç ယောဟန် ၇း၃ç ၄ç၅၊
၃။ တတိယ၊ သူတို့အား ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၂၀၊ ယောဟန် ၁၁း၅၃
၄။ စတုတ္ထ၊ သူတို့နှစ်ယောက်၏ အင်္ကျီကို ချွတ်ခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၂၃ç ယောဟန် ၁၉း၂၃၊
၅။ ပဥ္စမ၊ သူတို့နှစ်ဦးသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၂၈ç မဿဲ ၂း၁၄၊
၆။ ဆဌမ၊ သူတို့နှစ်ဦးအား အခကြေးငွေဖြင့်ရောင်းစားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၇း၂၈ç မဿဲ ၂၆း၁၅၊
၇။ သတ္တမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး စုံစမ်းခြင်းခံရသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၉း၁၂ç မဿဲ ၄း၁၊
၈။ အဌမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် မှားယွင်းစွာ စုံစမ်းခြင်းခံရကြသည်။ ကမ္ဘာ ၃၉း၁၄-၁၈၊ မဿဲ ၂၆း၆၀-၆၂၊
၉။ န၀မ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ချည်နောင်ခြင်းကို ခံရကြသည်။ ကမ္ဘာဦး ၃၉း၂၀၊ မဿဲ ၂၇း၂
၁၀။ ဧကဒသမ၊ နှစ်ယောက်စလုံးသည် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပြီးနောက်ချီးမြောက်ခြင်း ကိုခံခဲ့ ကြပါ သည်။ ကမ္ဘာဦး ၄ဝး၂ç၃၊ လုကာ ၂၂း၃၂
၁၁။ ဧကဒသမ၊ နှစ်ယောက်စလုံးသည် ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ချီးမြောက်ခြင်း ကိုခံခဲ့ကြပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၄၁း၄၁၊ ဖိလပ္ပိ ၂း၉-၁၁၊
၁၂။ ဒွါဒသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ငိုရေူအးကးခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၄၅း၂၊ ယောဟန် ၁၁း၃၅၊ လုကာ ၁၉း၄၁၊
၁၃။ တေရသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအပြစ်ရှိသူတို့အား ခွင့်လွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၄၅း၄၊ လုကာ ၂၃း၃၄၊
၁၄။ စတုဒသမ၊ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက မိမိလူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာဦး ၄၅း၅၊ မဿဲ ၁း၂၁၊
၁၅။ ပနာရသမ၊ လူတို့သည် ထိုသူနှစ်ဦးကို မကောင်းကြံစည်ကြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်က ချမ်းသာခြင်းဘက်သို့၊ လမ်းပြတောမူသည်။ ကမ္ဘာဦး ၅ဝး ၂၀ç၂၁